ကျ​နော်​၂၀၁၆ ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီလ​လောက်​က Mlm တစ်​ခုနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်​ QNet ​ပေါ့. ~ Myanmar Anti Mlm Group
ကျ​နော်​၂၀၁၆ ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီလ​လောက်​က Mlm တစ်​ခုနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်​ QNet ​ပေါ့.
ကျ​နော်​၂၀၁၆ ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီလ​လောက်​က Mlm တစ်​ခုနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်​ QNet ​ပေါ့. သူငယ်​ချင်းက အတင်း​ခေါ်တာနဲ့လိုက်​သွားတာ ဟို​ရောက်​​တော့ သူတို့လုပ်​ငန်းအ​ကြောင်း ​ဖောင်​ဖွဲ့တာပါပဲ ​နောက်​တပတ်​စ​နေ​ရောက်​​တော့ ကြည့်​မြင်​တိုင်​က diamond city ဟိုတယ်​က မဂ်​လာခန်းမကို ​ခေါ်သွားတယ်​ဗျ လက်​မှတ်​လဲဝယ်​ရတယ်​ ၆၀၀၀ ဆိုလားပဲ (.လက်​မှတ်​ခက ကျ​နော့်​ကို​ခေါ်လာတဲ့သူငယ်​ချင်းက ဝယ်​​ပေးတာ )အထဲမှာလူ​ထောင်​​ကျော်​တယ်​ဗျာ လူမျိုးစုံ​အောင်​ပါပဲ ပြီး​တော့ Qnet လုပ်​ငန်းအ​ကြောင်းသူတို့ကရှင်းပြကြပါတယ်​ တစ်​လကို ဘယ်​​လောက်​ နှစ်​လဆိုဘယ်​​လောက်​ တစ်​နှစ်​ဆိုဘယ်​​လောက်​နဲ့ ​ပြောတာ ကျ​နော်​ လည်း air con ​ကြောင့်​လားဘာလား​တော့မသိ ကြက်​သီး​တောင်​ထတယ်​ဗျ သူတို့လုပ်​ငန်းကို အမြန်​ဆုံးဝင်​​ရောက်​ဖို့တိုက်​တွန်းတာ​ပေါ့ဗျာ သူငယ်​ချင်းကို ​မေးကျိတယ်​ဗျ စဝင်​ဝင်​ချင်း ပစ္စည့်းတစ်​ခုဝယ်​ရမယ်​ဆို​တော့ ဘယ်​​လောက်​လဲ​ပေါ့ ဆယ်​သိန်းတန်​က အနိမ့်​ဆုံးတဲ့ဗျာ.. ဟာငါ့မှာအခု​လော​လောဆယ်​အာ့​လောက်​မရှိ​သေးဘူး ငါးသိန်း​လောက်​ပဲရှိတယ်​ ဆို​တော့ သူငယ်​ချင်းက မင်းရွာက လယ်​ခြံ နွား​တွေပြန်​​ရောင်း​ပေါ့တဲ့
ဒါ​တော့မဖြစ်​ဘူး ငါ့မိဘ​တွေက ဒါပဲလုပ်​စား​နေရတာ ​ရောင်းလို့​တော့မဖြစ်​ဘူး သကြ်​န်​ပြီးမှဝင်​​တော့မယ်​ ဆို​တော့ ​နေရာတစ်​ခုက အ​ရေးကြီး​ကြောင်း အမြန်​ဆုံးဝင်​သင့်​​ကြောင်းထပ်​ပြီးတိုက်​တွန်းပြန်​တယ်​ဗျ.ဒါနဲ့ကျ​နော် ​လည်း သကြ်​န်​ပြီးမှပဲလုပ်​ငန်းစမယ်​လို့​ပြောပြီးပြန်​လာပြန်​တယ်​ အိမ်​ပြန်​​ရောက်​​တော့ စဉ်းစားကြည့်​တယ်​ ဆယ်​သိန်းဆိုတာ မနည်းဘူး ငါလူဘယ်​လိုဆွယ်​မလဲ​ပေါ့ .. ဒါနဲ့​နေလိုက်​တာဗျာ သကြ်​န်​​ရောက်​​တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်​တာနဲ့ ဘာနဲ့ ဆို​တော့ သူတို့qnet လုပ်​ငန်းထဲမဝင်​လိုက်​မိဘူးဗျ... ဒါနဲ့ဟိုတ​လောက Mlm debate လုပ်​တယ်​ ပွဲဆူတယ်​ဆိုတာနဲ့ ငါ့ကောင့်​ကြီးလည်း အ​ခြေအ​နေဘယ်​လိုရှိလဲဆိုပြီး ဖုန်​ဆက်​ကြည့်​လိုက်​တာ ဖုန်းကဝင်​ပါရဲ့ မက်ိုင်​ဘူးဗျ သူ​ဋ္ဌေးဖြစ်​သွားလို့ပဲ မကိုင်​​တော့တာလား အ​ကြွေးပတ်​​နေလို့ပဲမကိုင်​​တော့တာလားမသိပါဘူးဗျာ..​​သြော်​ကျန်​​သေးတယ်​ သူတို့​ပြောသွားတာ facebook ​ပေါ်ကစကားကို မယုံပါနဲ့တဲ့ လက်​​တွေ့လုပ်​ကျိလိုက်​ပါဆိုပဲ......ဘာပဲဖစ်​ဖြစ် မဝင်​ဖြစ်​လိုက်​တာ ကံတရားကို​ကျေးဇူးတင်​တယ်​ဗျာ မဟုတ်​ရင်​ခု​လောက်​ဆို facebook ​တောင်​သုံးနိုင်​မှာမဟုတ်​ဘူး...တကယ့်​လက်​​တွေမို့​ရေးလိုက်​တာဘာ